मृत्युपछिको सम्मान « Loktantrapost
२८ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार ०१:४७
जन्म र मृत्यु साश्वत सत्य हो । मानिस जन्मिन्छ अनि मर्छ । दैनिक करोडौँ मानिस जन्मछन् र मर्छन् पनि । जन्मिनु र मर्नु भनेको जीवनचव्रm हो । जुन निरन्तर चलिहन्छ । यो नियमित हुने कुरा भए पनि केही मानिसको मृत्युले घर–परिवार, आफन्त मात्र नभई देश अनि विश्व नै शोकमग्न हुन्छ । मर्माहत् हुन्छ अनि उसको मृत्युले आफूलाई दुःखी तुल्याएको महसुस गर्छ ।
देश, समाज अनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, विकास र गौरव बढाउन आफ्नो जीवन अर्पित गरेका व्यक्तिको अवसानले शोकाकुल हुनु नौलो होइन । त्यस्ता युग पुरुषको निधनबाट अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिका ठाउँमा पूर्ति हुन केही वर्ष मात्र होइन, युग नै लाग्न सक्छ ।
हिरा बहुमूल्य पत्थर हो । तर, कोइलाबाट हिरा बन्छ । हिराको मूल्य र महत्व विशेष प्रकारको छ । त्यही कोइलालाई हिरा बन्न कैयौँ वर्ष लाग्छ । त्यसमा उचित ताप र चाप परेपछि कोइलाले हिराको रुप धारण गर्छ । जुन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जोसँग हुन्छ, उसले आफूलाई गौरवशाली ठान्दछ । त्यस्तै, युगौँसम्मको प्रतिक्षा र तपश्यापछि देश भनौँ वा विश्वले नै त्यस्ता युग पुरुषको प्राप्त गर्छन् । विश्व इतिहास त्यस्ता रत्न देख्न सकिन्छ ।
कुनै कुराको पनि महत्व गुमाएपछि मात्र हुँदो रहेछ । रहेसम्म वास्ता नगर्ने र नरहेका बेला त्यसको महत्व बुझ्ने परम्परा विश्व व्याप्त छ । विश्व इतिहास हेर्ने हो त्यस्ता कैयौँ व्यक्ति छन् । जसको मृत्युपछि गुनगान गरियो । वाहवाही गरियो । विभिन्न स्थानमा शालिक बनाइयो ।
हामीले पनि हालै साङ्गीतिक क्षेत्रका एक अनमोल रत्न गुमाएका छौँ । अम्बर गुरुङ साङ्गीतिक क्षेत्रका उज्जवल नक्षत्र जुन भौतिक रुपमा नरहे पनि कहिल्यै विलिन हुने छैन । नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा सदैव चम्किरहने छन् । साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका गुरुङको जीवन सङ्घर्ष कम चुनौतीपूर्ण थिएन । आर्थिक अवस्था उनको कस्तो थियो भन्ने जगजाहेर नै छ । चाकडी नगर्ने स्वभाव र पेशाप्रतिको बफादारिता उनको गहना थियो । त्यही गहनाका साथ उनी बिदा पनि भए सदाका लागि ।
हामीमा मरेपछि गुनगान गाउने कला प्रशस्त छ । बाँचुन्जेलसम्म वास्ता नगर्ने अनि मरेपछि तारा, हिरा भनेर प्रचार गर्नु भन्दा त्यस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरू जीवितै अवस्थामा हेचार गर्नु उचित हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अम्बर गुरुङको सहयोगबाट जीवन गुजार चलेको थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
अहिले पनि देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना गरी देश र देशबासीका लागि लड्ने वीर पुरुष र महिला छन् । जीवन उत्सर्ग गरी हामीलाई स्वतन्त्र बनाउने सहिदका परिवार भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्गभङ्ग भई जीवन मरणको दोसाधमा रहेकाहरू पनि धेरै छन् । ती जीउँदा सहिदहरूको सम्मान गर्न ढिला भइसकेको छ । दोसल्ला ओढाएर मात्र होइन, जीवन धान्न सक्नेगरीको गाँस, बास र कपासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जस्तौसुकै सम्मान दिए पनि मरेपछि मर्नेले के पाउलान्, त्यो सबैलाई थाहा छ ।
Are you looking for internet dating sites for marital relationship? Both both you and your potential future partner
Internet dating Facts for guys
One of the best dating facts for men is to find out all of the going out with
Basic Ways to Date Online
Dating online has changed intoahit in the recent years. Many people are becoming aware that they